[တရားဝင်] dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - iPhone / iPad နှင့်သင့် PC များအဘို့ကို iOS Screen Recorder
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - iOS ကို Screen Recorder
အလွယ်တကူသင့်ရဲ့ iPhone, iPad, သို့မဟုတ်, iPod ၏မျက်နှာပြင်မှတ်တမ်းတင်။
ကြိုးမဲ့သင်၏ကွန်ပျူတာ screen ပေါ်မှာသင့် iOS device mirror ။
စံချိန်ဂိမ်းများ, ဗီဒီယိုများ, နှင့်ပိုပြီး။
iOS က 10.3 ဖို့အတွက် iOS 7.1 ကို run ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးသည်။
Windows နဲ့ iOS ကိုနှစ်ဦးစလုံးဗားရှင်းပါရှိသည်။
သင့်ရဲ့ PC ကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့ iPhone ကိုအသံဖမ်း
သင့်ကိရိယာ၏ system ကိုအသံဖမ်းယူပါ။
အဘယ်သူမျှမသုံးနေပြီနှင့်အတူစစ်မှန်သောအချိန်အတွက်သင့်ရဲ့ device ကို mirror ။
1 Start ဖို့ကိုနှိပ်ပါ
သင့်ရဲ့ PC မှာလူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်း Play
iOS ကို Screen Recorder နှင့်အတူသင်အလွယ်တကူနဲ့ချောချောမွေ့မွေ့သင့်ရဲ့ PC မှာ (တိုက်ပွဲ Royale, မျိုးနွယ်စုများ၏တိုက်ပွဲ, Pokemon နှင့်တူ ... ) အများဆုံး polular ဂိမ်းများကိုဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်။
ကြိုးမဲ့သင့်ရဲ့ screen ကိုမျှဝေပါ
iOS အတွက် Recorder သူတို့ကိုသင်အပ်လုဒ်တင်ခြင်းမရှိဘဲကြိုးမဲ့ကြီးမားတဲ့ screen ပေါ်မှာသင့်ရဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုဝေမျှပေးနိုင်ပါတယ် Screen ။
ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင်၏သင့် iOS တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ contents တွေကိုအသံဖမ်း။
သင်အလွယ်တကူ click တစ်ချက်နှင့်အတူသင်၏ဂိမ်းများ, ဗီဒီယိုများနှင့်ပိုပြီးမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ကွန်ပျူတာသို့ပို့ကုန်, HD ဗီဒီယိုများ
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - iOS ကို Screen Recorder သငျသညျကှနျပြူတာ, HD ဗီဒီယိုများတင်ပို့နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ MP4 ကိုဖိုင်အဖြစ်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်သင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေများမျှဝေသို့မဟုတ် Youtube ကိုမှ upload တင်လို့ရပါတယ်။
သငျသညျနောက်ဆုံးပေါ် iPhone မှာ 7, အိုင်ပက် Pro ကို, ဒါမှမဟုတ်အဟောင်းက iPhone 4, iPad နဲ့ 1 ကိုအသုံးပြုပြီးဖွင့်နေပါစေ, ဒီ iOS က Screen Recorder iPhone, iPad နှင့် iPod touch နဲ့မော်ဒယ်များအားလုံးနှင့်အပြည့်အဝလိုက်ဖက်သည်။
လူများ၏အပြည့်အဝအခန်းတခန်းနှင့်အတူသင့်ရဲ့ device ရဲ့ screen ကိုဝေမျှဖို့တစ်ပရိုဂျက်တာကိုသုံးပါ။
ကြေးမုံနှင့်ပိုကြီးတဲ့ screen ပေါ်မှာမိုဘိုင်းဂိမ်းမှတ်တမ်းတင်။
သင့်ရဲ့ iPhone အလုပ်မှာသင့်ရဲ့တင်ပြချက်များအတွက်သုံးပါ။
ထုတ်ကုန်တခုအဖြစ်နှင့်ဆန္ဒပြပွဲများကိုဖန်တီးရန် mirroring Real-time ကိုသုံးပါ။
စံချိန် app များ, ဂိမ်းများ, သင်၏ iPhone မှအခြားအကြောင်းအရာများကို။
အဆိုပါ smoothest iOS ကို screen ကိုမှတ်တမ်းတင်အတွေ့အကြုံကို!
, ကို Safe အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ရိုးရှင်းသော။
iOS က 10.3, ကို iOS 10, iOS ကို 9, iOS ကို 8 နဲ့ iOS ကို 7.1
ကိရိယာတန်ဆာပလာ dr.fone နိုင်သလား - iOS ကို Screen Recorder ငါ၏အဗီဒီယိုများရယူ?
အမှတ်သင်၏ဗီဒီယိုကိုသင့်ကွန်ပျူတာသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နေကြသည်။ dr.fone သူတို့ကိုသို့မဟုတ်သင့်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် mobile device တစ်ခုခုမှာသိမ်းထားတဲ့အခြားမည်သည့်ဒေတာရယူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ငါကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ပရိုဂျက်တာသို့ကျွန်ုပ်၏ဖုန်း plug ဖို့လိုအပ်ပါသလား?
အမှတ်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ပရိုဂျက်တာသင့်ရဲ့ဖုန်းကဲ့သို့တူညီသော local area network ပေါ်မှာသေချာပါစေနှင့်ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်ပါ။
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာပါသလား - iOS ကို Screen Recorder မိုဘိုင်း app ကိုရသလော
သေချာတာပေါ့။ သင်သည်ဤမှသွားနိုင်ပါတယ် iOS ကို Screen Recorder App ကိုတပ်ဆင်ခြင်း အသေးစိတ်စာမျက်နှာ။
iOS ကို Screen Recorder ထောက်ခံမှု Jailbreak လုပ်ထားတဲ့ Device များ - dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာပါသလား
ဟုတ်ပါတယ်။ dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - iOS ကို Screen Recorder Jailbreak လုပ်ထားတဲ့နှင့် Non-jailbreak ပြုလုပ်ထားတဲ့ထုတ်ကုန်နှစ်ခုလုံးကိုထောက်ခံပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါအသံသွင်းတာများနှင့်ကွန်ပျူတာငါ့ iPhone5ကိုထင်ဟပ်။
ဟာဆန်, iPhone5ကို
dr.fone ငါ့အကို iPhone 6s ကနေဂိမ်းမှတ်တမ်းတင်ဖို့ငါ့ကိုကူညီပေးသည်, ကသုံးစွဲဖို့အလွန်လွယ်ကူသည်။ ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။
N. ဆိုးကာ, iPhone, 6s
ဒါဟာ dr.fone ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာငါ့ iPhone ကိုမှန်များနှင့်နှစ်ဦးစလုံးမှတ်တမ်းတင်နိုင်မအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။
ယောရှုသည် Brenne, iPhone,
iPhone ပေါ်မှာ Capture နှင့်မှတ်တမ်းမျက်နှာပြင်လုပ်နည်း
PC ကွန်ပျူတာ, Mac နှင့် Android အတွက်အကောင်းဆုံး 12 သည် iPhone Emualtors
သင်သိလိုပါသလား 10 သည် iPhone Screen Recorder
Mac ပေါ်တွင် iPhone ကိုမျက်နှာပြင်ကိုအသံဖမ်းလုပ်နည်း
PC ကိုတွင်တွင် Android မျက်နှာပြင်ကိုအသံဖမ်းရန်ကဘယ်လို
အလွယ်တကူက iPhone နှင့် iPad များဖန်သားပြင်မှတ်တမ်းတင်။
iOS 8 ကို & နောက်ပိုင်းတွင်ဘို့မရရှိနိုင်
အဘယ်သူမျှမ jailbreak လိုအပ်သည်။
သင့်ရဲ့ iPhone, iPad ပေါ်မှာရှိသမျှမှတ်တမ်းတင်ဖို့တစ်ခုမှာနှိပ်ပါ။
အလွယ်တကူ, ဗီဒီယိုကျူတိုရီရယ် Make
စံချိန်သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှခြေလှမ်းက iPhone နှင့် iPad ဝေမျှမယ်လဲ tutorial အပေါ်ပိုမိုလွယ်ကူစွာနှင့်ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်
တိတ်တဆိတ်, Snapchat ဗီဒီယိုများ & ရုပ်ပုံများကို Save
iPhone / iPad ပေါ်တွင် pitures / ဗီဒီယိုများ Snapchat စံချိန်
ထပ်တလဲလဲ, တိုက်ရိုက်အသံလွှင့် Heighlights ခံစားကြည့်ပါ
iPhone / iPad ပေါ်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မထုတ်လွှင့် Watch
ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ iOS ကို screen ကိုမှတ်တမ်းတင်လိုပါသလား?
တစ်ဦးက desktop version ကိုဒီက iOS Screen Recorder app ကိုအတူလည်းရှိပါသည်။
PC ကိုဗားရှင်း Download
* Wondershare ™အစီအစဉ်များကိုသငျသညျ protected ပစ္စည်းကော်ပီကူးဖို့ခွင့်မပြုပါဘူးသတိပြုပါ။ သင်မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်မူပိုင်ပိုင်ရှင်ထံမှကူးယူခွင့်ပြုချက်ရယူကြရသောပစ္စည်းကူးယူ၌ဤ software ကိုသုံးနိုင်ပါသည်။
IE ကို / Firefox ကို / က Chrome / အော်ပရာ / Safari က / Maxthon / ကို Netscape
dr.fone အကြောင်း | စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ & အခြေအနေများ | ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သော | မြေပုံအညွှန်း | ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
မူပိုင်ခွင့်© 2007-2017 Wondershare ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။
<< Back ကို
မှတ်တမ်းကို iOS မျက်နှာပြင် Moment အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
အဆင့် 1: သင့်ရဲ့ device ကိုပေါ်မှာဤ iOS ကို Screen Recorder app ကို Install လုပ်ပါ။
•သင့်ရဲ့ iPhone / iPad ကိုအပေါ်အသံဖမ်းရရှိရန်အထက် Install ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
•အဲဒီနော, သင် installation ကိုဆက်လက်ခွင့်ပြုချက်တောင်းပါလိမ့်မယ်။
•ကအတည်ပြုဖို့ "Install" ကိုနှိပ်ပါ, အဲဒီနောက် install သည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်သင့် home button ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
မှတ်ချက်: အကယ်. သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဤစာမကျြနှာကိုဖတျရှုနေတယ်ဆိုရင်, အောက်ကနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုခုမှတဆင့်သင်၏ iPhone / iPad ကို / iPod touch ပေါ်မှာသွားရောက်ကြည့်ရှုပြောင်းရန်ကျေးဇူးပြုပြီး:
သင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ် Method ကို 1. Open ကို Safari နှင့် drfone.wondershare.com/ios-screen-recorder.html ရိုက်ထည့်
သင့် iOS device ပေါ်မှာဒီ app ကို install လုပ်ဖို့နည်းလမ်း 2. Scan ကိုအောက်က QR ကုဒ်ကို။
အဆင့် 2: ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူကိုယုံကြည်စိတ်ချ။
•အအသံဖမ်း၏ installation ပြီးနောက်, Screen Recorder မှဖြန့်ချိသွားပါ။
•သင့်က iOS device ကို၏မျက်နှာပြင်မှတ်တမ်းတင်ရန် "Next ကို" ကိုနှိပ်ပါ။
ဒါကြောင့်ပြီးစီးသောအခါ•သင်၏ဗီဒီယို Camera Roll တွင်လှေတျတျောမူပါလိမ့်မည်။ သငျသညျအဲဒီမှာသင်၏ HD မှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုများရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
အဆင့် 3: သင့်ရဲ့ screen ကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့စတင်ပါ။
ဝေစု ကို install